क्वारेन्टाइनमा बसेकी महिलाले जुम्ल्याहा बच्चा जन्माइन् – Health Post Nepal
२०७७ वैशाख २७ गते ११:२८
कोरोना रोक्न कांग्रेस सभापतिद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण
प्रदेश ५ का तीन जिल्लामा ६ वटा आइसोलेसन अस्पताल
नेकपाकाे आन्तरिक विवादले कोरोना कार्यदल शिथिल
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले कोरोनाको आशंका रहेका लागि राख्नका लागि सञ्चालन गरेको क्वारेन्टाइनमा बसेकी महिलाले जुम्ल्याहा बच्चा जन्माएकी छिन् । वडा नम्वर १३ फुलवारी घर भएकी अनिता यादवले राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा जुम्ल्याहा छोरी जन्माएकी हुन् ।
अस्पतालकी मेडिकल अधिकृत डा. लिजा पुरीका अनुसार दुवै वच्चा स्वस्थ रहेपनि एक जनाको तौल कम रहेको छ। ‘एउटाको १.८ केजी र अर्काको १.५ केजी रहेको छ’ अधिकृत डा. पुरीले बताइन् । तौल कम रहेपनि दुवै वच्चाले दुध खान थालेको पनि उनले जानकारी दिइन् ।
वच्चाहरु शुक्रवार राती ९.१५ मा जन्मिएको पनि अस्पतालले जानकारी दिएको छ।
गर्भवति यादव बिहीबारदेखि क्वारेन्टाइनमा वस्न थालेकी थिइन् । चार महिना अगाडिरुपैडिहाको विलौनीमा माइतिघर रहेकी यादव बिहीबार मात्रै २ दिन हिँडेर घरमा आएकी थिइन् ।
गर्भवति यादवका कोही पनि आफन्त नआएपछि उपमहानगरपालिकाले नै सबै जिम्मेवारी लिएर उनको उद्दार गरेको थियो ।
भारतबाट आएको भनेर गाउँलेहरुले खवर गरेपछि उनलाई तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको कोरोना रेस्क्यु टिमले बिहीबार राति नै क्वारेन्टाइनमा ल्याएको जनस्वास्थ्य शाखाका प्रमुख ओमप्रकाश न्यौपानेले जानकारी दिए । उनको र्‌यापिड टेस्ट नेगेटिभ आएको पनि न्यौपानले वताए ।
यादवलाई शुक्रवार बिहान १२ बजेतिर व्यथा लागेपछि प्रादेशिक अस्पतालमा ल्याइएको विपद् शाखाका प्रमुख भिमप्रकाश खत्रीले जानकारी दिए । ‘जटिल अवस्था भनेपछि हामीले नेपालगञ्ज लैजाने तयारी पनि गरेका थियौं’ खत्रीले भने ।
गर्भवति यादवका कोही पनि आफन्त नआएपछि उपमहानगरपालिकाले नै सबै जिम्मेवारी लिएर उनको उद्दार गरेको थियो । नगरप्रमुख घनश्याम पाण्डेको निर्देशनमा उनको सम्पूर्ण उपचारको जिम्मा लिइएको हो । ‘जहाँ लैजानुपरेपनि हामीले जिम्मा लिने कुरा थियो’ शाखा प्रमुख खत्रीले वताए ।
आमा र वच्चाका अवस्था अहिले स्वस्थ रहेको छ । उपमहानगरपालिकाले शुक्रवार अबेर मात्रै उनका श्रीमान र छोरीलाई अस्पतालमा ल्याएको थियो । उनका २ छोरा र २ छोरी रहेका छन् ।
Tags: काेराेना, जुम्ल्याहा जन्म, दाङ